Mako: covid-19 | Martech Zone
Shanduko yeDhijitari uye Kukosha kwekubatanidza Strategic Vision
Chipiri, February 16, 2021 Chipiri, February 16, 2021 Carter Hallett
Imwe yesirin'i dzesirivha dzematambudziko eCOVID-19 kumakambani kwave kuri kumhanyisa kwakakosha kweshanduko yedhijitari, yakasangana mu2020 ne65% yemakambani maererano naGartner. Zvave zvichikurumidza-kumberi sezvo mabhizimusi pasirese akachinjisa maitiro avo. Sezvo denda iri rakaita kuti vanhu vazhinji vadzivise kusangana-ne-kumeso kusangana muzvitoro nemahofisi, masangano emarudzi ese anga achipindura vatengi nemakasitoma ari nyore. Semuenzaniso, vatengesi uye makambani eB2B
Unoda Rubatsiro Kushambadzira kune Vateereri Vateereri? Kutanga Pano
Svondo, Kukadzi 7, 2021 Svondo, Kukadzi 7, 2021 Wendy Covey
Unyanzvi harisi iro basa zvakanyanya senge iri nzira yekutarisa pasirese. Kune vashambadziri, kufunga nezvemaonero aya kana uchitaura nevateereri vane hunyanzvi zvakanyanya unogona kuve mutsauko pakati pekutorwa zvakanyanyisa nekuregeredzwa. Masayendisiti uye mainjiniya anogona kuve akaomarara vateereri kutsemuka, chinova chinokonzeresa kuHurumende Yekutengesa kune Injiniya Rondedzero. Kwegore rechina rakateedzana, TREW Kushambadzira, iyo inotarisa chete pakushambadzira kune tekinoroji
7 Coupon Strategies Iwe Unogona Kupinza Kune Iyo Denda Kutyaira Dzimwe Shanduko Pamhepo
Chipiri, February 2, 2021 Chipiri, February 2, 2021 Julia Krzak
Zvinetso zvemazuva ano zvinoda mhinduro dzemazuva ano. Nepo pfungwa iyi ichirira zvechokwadi, dzimwe nguva, nzira dzakanaka dzekushambadzira ndidzo chombo chinonyanya kushanda mune chero nhumbi yemushambadzi wedigital. Uye pane chero chinhu chekare uye chakapusa-chiratidzo kupfuura kuderedzwa? Iyo yekutengesa yakasangana nekuvhuna-kuputsa kushamisika kwakaunzwa neiyo COVID-19 denda. Kwenguva yekutanga munhoroondo, takaona mashopu ezvitoro achibata nemamiriro ezvinhu akaoma emusika. Dzakawanda kukiyiwa kwakamanikidza vatengi kutenga pamhepo. Nhamba yacho
Kuisa AI Kuvaka Kunze Iyo Yakakwana Yekutenga Mbiri uye Ununure Zvakasarudzika Zviitiko
Chipiri, January 19, 2021 Chipiri, January 19, 2021 Nate Burke
Mabhizinesi anogara achitsvaga nzira dzekuvandudza zvese kugona uye kushanda kwezvavanoita. Uye izvi zvinongova zvinotarisisa zvakanyanya sezvatinoramba tichifamba nenzira yakaoma uye isina kugadzikana yeCVV-yakashambadzirwa mamiriro ekunze. Neraki, ecommerce iri kubudirira. Kusiyana nekutengesa kwepanyama, iyo yakave yakakanganiswa zvakanyanya nemitemo yedenda, kutengesa kwepamhepo kukwira. Munguva ye2020 festive mwaka, inova ndiyo inonyanya kubatikana nguva yekutenga gore rega rega, UK online yekutengesa yakakwira ne
Nei Resilient B2B Commerce Ndicho Chete Nzira Yekuenderera Kune Vagadziri Uye Vatengesi Post COVID-19
China, December 17, 2020 China, December 17, 2020 Rajneesh Kumar
Iyo COVID-19 denda yakakanda makore ekusava nechokwadi munzvimbo yebhizinesi uye zvakakonzera kumiswa kwezviitiko zvakati zvehupfumi. Nekuda kweizvozvo, mabhizinesi anogona kupupurira paradigm shanduko mumaketani ekupa, mhando dzekushandisa, maitiro evatengi, uye nzira dzekutenga nekutengesa. Izvo zvakakosha kutora matanho anoshanda kuisa bhizinesi rako munzvimbo yakachengeteka uye kumhanyisa maitiro ekudzosa. Kutsiga kwe bhizinesi kunogona kuenda nenzira yakareba mukugadzirisa kune zvisingafanoonekwi
Ecommerce Statistics: Kukanganisa kweiyo COVID-19 Denda uye Lockdowns paRetail neInternet.
Mugovera, December 5, 2020 Mugovera, December 5, 2020 Douglas Karr
Iko kukanganisa kwehutachiona kwakanyatsoita kuti vese vakundi uye vakundwa gore rino. Nepo vatengesi vadiki vakamanikidzwa kuvhara magedhi avo, vatengi vanonetsekana nezve COVID-19 vaityairwa kuodha online kana kushanyira yavo yemuno-hombe-bhokisi mutengesi. Iyo denda uye inosanganisirwa nezvibvumirano zvehurumende zvakakanganisa iyo indasitiri yese uye isu tingangove tichazoona iyo mhedzisiro mhedzisiro kwemakore anouya. Iyo denda yakakurumidza maitiro evatengi. Vatengi vazhinji vaive vasina chokwadi uye vakaramba vachizeza